Francisco Franco Bahamonde ((4 Diseembar 1892 - 20 Nofeembar 1975) wuxuu ahaa Jeneraal Isbaanish ah oo hogaaminayay xoogagii wadaniga ahaa ee afgembiyay Jamhuuriyadii labaad ee Isbaanish intii lagu guda jiray Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka kadibna wuxuu xukumay Spain intii u dhaxeysay 1939 ilaa 1975 isagoo kaligii taliye ah, isagoo qaatay magaca Caudillo. Muddadan taariikhda Isbaanishka, laga soo bilaabo guushii waddaniyeed ilaa dhimashadii Franco, waxaa guud ahaan loo yaqaan Francoist Spain ama kali taliskii Francoist.
Wuxuu ku dhashay magaalada Ferrol, Spain wuxuuna ka soo jeeday qoys dabaqad sare ah, Franco wuxuu ka soo shaqeeyay ciidamada Isbaanishka isagoo ka mid ahaa akadeemiyada Akadeemiyada Lugta Toledo laga soo bilaabo 1907 ilaa 1910. Intii uu ka shaqeynayay Marooko, wuxuu ka soo baxay darajooyinka si uu u noqdo taliye guuto sanadkii 1926, isagoo da 33, isagoo noqday jeneraalkii ugu da'da yaraa ee Spain. Laba sano kadib Franco wuxuu noqday agaasimaha Akadamiyada Milatariga ee guud ee Zaragoza. Isagu muxaafid iyo boqortooyo ahaan, Franco wuxuu ka xumaaday baabi’inta boqortooyadii iyo aasaaskii jamhuuriyaddii labaad sanadkii 1931. Waxaa aad uga xumaaday xiritaankii Akadeemiyadiisa, laakiin sikastaba wuu usii waday howlihiisii ​​ciidanka Jamhuuriga. Xirfadiisa ayaa sii laba jibaartay ka dib markii garabka midig ee CEDA iyo PRR ay ku guuleysteen doorashadii 1933-kii iyaga oo awood u siinaya inuu hogaamiyo xakameynta kacdoonkii 1934 ee Asturias. Franco waxaa si kooban loogu dallacsiiyay Abaanduulaha Ciidanka Xoogga kahor doorashadii 1936-kii oo u dhaqaaqday garabka bidix ee caanka ah ee awoodda, isaga oo u weeciyay jasiiradaha Canary. Ka dib diidmadii ugu horreysay, wuxuu ku biiray inqilaabkii militariga ee July 1936 kaas oo, markii uu ku guul darreystay inuu Spain qabsado, dhaliyay Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka.
Intii lagu jiray dagaalka, wuxuu amar ku bixiyay ciidamadii gumaysiga Spain ee Afrika ka dib dhimashadii inta badan hoggaankii jabhadda wuxuu noqday hoggaamiyaha keliya ee kooxdiisii, markii dambena wuxuu u magacaabay Generalissimo iyo Madaxa Qaranka 1936. Wuxuu isku koobay dhammaan xisbiyadii waddaniyiinta FET y de las JONS ( abuurista dowlad hal xisbi ah). Seddex sano kadib Wadaniyiintii waxay ku dhawaaqeen guul taasoo sii dheereysay kali talisnimadii Franco ee Isbaanishka iyada oo loo marayo mudo caburin ah oo ay ku hayeen mucaaradka siyaasadeed. Kali talisnimadiisii ​​adeegsiga shaqaalaynta qasabka ah, xeryaha uruurinta, iyo xukunada dilka waxay horseeday inta udhaxeysa 30,000 ilaa 50,000 oo dhimasho ah. Marka lagu daro dilalka xilliyada dagaalka, tani waxay ka dhigeysaa tirada dhimashada Argagixisada Cad inta u dhexeysa 100,000 iyo 200,000. Dagaalkii sokeeye kadib dagaalkii sokeeye, Franco wuxuu ku xukumay awood ka badan hogaamiye kasta oo Isbaanish ah kahor ama wixii ka dambeeyay, wuxuuna soo saaray cibaado shaqsiyadeed oo ku xeeran xukunkiisa asagoo aasaasay Movimiento Nacional. Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka wuxuu ilaaliyay dhex-dhexaadnimada Isbaanishka laakiin wuxuu taageeray Axis - oo xubnaheeda Talyaaniga iyo Jarmalku ay taageereen intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye - siyaabo kala duwan, taasoo dhaawacday sumcadda caalamiga ah ee waddanka.
Intii lagu guda jiray bilowgii Dagaalkii Qaboobaa, Franco wuxuu Spain ka qaaday bartamihii qarnigii 20-aad ee niyad-jabka dhaqaale iyada oo loo marayo siyaasadaha tignoolajiyadda iyo dhaqaalaha ee xorriyadda, isagoo hoggaaminaya muddo koritaanka baahsan oo loo yaqaan "Mucjisada Isbaanishka". Isla mar ahaantaana, xukunkiisii ​​wuxuu ka beddelay keli-talisnimo wuxuuna noqday keli-taliye leh badnaan xadidan wuxuuna hoggaamiye u noqday dhaqdhaqaaqii ka dhanka ahaa Shuuciyadda, isagoo taageero ka helay reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka. Kali-talisnimadii way jilicday oo Luis Carrero Blanco wuxuu noqday kacdoonka Franco. Kaalinta Carrero Blanco ayaa sii fiday kadib markii Franco uu bilaabay inuu la halgamo cudurka Parkinson sanadihii 1960-yadii. Sannadkii 1973 Franco wuxuu iska casilay xilka ra'iisal wasaaraha - oo laga soocay madaxa xafiiska gobolka tan iyo 1967 - sababo la xiriira da 'da iyo jirro dartii, laakiin wuxuu ku sii jiray awoodda isagoo ah kan dambe iyo taliyaha guud. Franco wuxuu dhintay 1975, wuxuu jiray 82, waxaana la geeyay Valle de los Caídos. Wuxuu dib u soo ceshay boqortooyadiisii ​​sanadihii ugu dambeeyay, waxaana ku xigay Juan Carlos oo noqday Boqorka Spain, kaasoo isna, horseeday ku-meelgaarkii Isbaanishka ee dimuqraadiyadda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Franco&oldid=219140"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2021, marka ee eheed 16:38.